ဗုဒ္ဓ Trends အကြောင်း
Buddhatrends, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှလူအစုအဝေးအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သူတို့ဝတ်စားဆင်ယင်မူလလမ်းမှတဆင့်စစ်မှန်သောထုံးစံ၌မိမိတို့ကိုယ်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေအမျိုးသမီးတွေကမ်းလှမ်းရန် Montreal, ကနေဒါဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။
Buddhatrends လည်းဖြစ်ပါတယ်ထွက်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်အခမဲ့ဝိညာဉ်များအတွက်တစ်နေရာတည်းမှာ-ဆိုင်:အဆိုပါအဆိုတော်များ, ခရီးသွား, Bohemians, Hippies အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, အမြိုးသမီးမြားအဘယ်သူသည် ဘာမှထပ်မလိုခငျြဒါပေမယ့်ရန် သူတို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့စတိုင်မှတဆင့်၎င်းတို့၏ကောင်းသော Vibe ချွတ်ပြပါ။ကျွန်တော်တို့ကိုအတွက်အခမဲ့ဝိညာဉျကိုကြှနျုပျတို့ပွုအရာအားလုံးကျနော်တို့ကိုယျ့ကိုယျကိုသယ်ဆောင်အထူးသဖြင့်လမ်းအတွက်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုမနှောမြော။ သငျသညျဝတ်စားဆင်ယင်လမ်းကိုသငျတို့ကိုကြည့်ရှုသည်လမ်းထက်သင့်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့နဲ့အခြားအဘယ်အရာပိုကောင်းနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ Buddhatrends ရုံ Wanderers တစ်ဆိုင်မှာဒါပေမဲ့သူတို့အမှန်တကယ်ချင်ကြေညာချက်လုပ်ပုံကိုသိသူခေတ်သစ်ဉာဏ်အလင်းမိန်းမတို့အဘို့လူနေမှုပုံစံစတဲ့လမ်းညွှန်မဟုတ်ပါဘူး။
Buddhatrends မှာကြည့်, ငါတို့သည်သင်တို့၏စတိုင်ရွေးချယ်ဖို့သင့်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုယုံကြည်နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏အချိန်, နှစ်သိမ့်ခြင်းနှင့်သင်တန်း၏တနျဖိုးထား။ ထို့ကြောင့်, ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အကျွန်ုပ်တို့၏ collection များကို, လွတ်လပ်သောစိတ်ဓါတ် embody ကြောင်းပစ္စည်းများထည့်သွင်းဖို့အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်ကိုရှာဖွေသည်ကမ္ဘာ့အပေါ်ယံအခွံ။ ကျနော်တို့ကသူတို့ရဲ့မူရင်း, ဘက်စုံ, ထူးခြားမှုများနှင့်နှစ်သိမ့်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားကြောင်းသူတို့သာထုတ်ကုန် handpick ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ collection များကိုစတိုင်များသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုထပ်တိုးဖို့ရည်ရွယ်ထားသော်လည်း, သငျသညျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Buddhatrends မှာခေတ်ရေစီးကြောင်းဖက်ရှင်မှကိုက်ညီကြောင်းမည်သည့်ပစ္စည်းကိုရှာဖွေဘယ်တော့မှလိမ့်မယ် ငါတို့သည်သင်တို့၏ထူးခြားမှုကိုယုံကြည်, သငျသညျရှေးခယျြမှု၏လွတ်လပ်ခွင့်ကိုထိုက်ကသင့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုက်ညီသောကြည့်ဖန်တီးဖို့အတွက်သင့်ကိုမှတက်ကြောင်း,
အခမဲ့ဝိညာဉ်အဖြစ်ကိုယျ့ကိုယျကို, သင်သာအကောင်းဆုံးရောက်စေဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပါပဲ။ထူးခြားတဲ့ဝတ်ထား၏ဇိမ်ခံ၌အကြှနျုပျတို့၏အစုအဝေးနဲ့အလိုလိုကျလှနျးခွငျးမှတဆငျ့လှည့်လည် ခြုံငုံ & Jumpsuits, ချော့မော့ Plus အား Size ကိုဆင်မြန်း, ပိတ်ချော Palazzo ဘောင်းဘီ နှင့်သင့်စစ်မှန်တဲ့အရောင်များကိုဖော်ပြဆက်စပ်ပစ္စည်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ထားသည့် collection များကိုဖွင့်သင့်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနဲ့တူမတူထူးခြားခြင်းနှင့်လွတ်မြောက်, လတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေတဲ့အသက်ရှုဖြစ်ကြသည်။ Buddhatrends သင်တိုင်းအခါသမယအတွက်အဝတ်အထည်နှင့်အသုံးအဆောင်များပေးထားပါတယ်။ ရောထွေးနှင့်ပွဲစဉ်များနှင့်လမ်းပေါ်မှာမှကမ်းခြေကနေဖက်ရှင်ပြင်ဆင်ချက်ရ!
သင်သည်သင်၏ထူးခြားတဲ့စတိုင်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးကြည့်ရှုကူညီပေးနေကျော်လွန်ပြီး, ငါတို့ရှိသမျှသည်သင်တို့အဘို့အအပြုသဘောဆောင်သောအတွေ့အကြုံအားဝယ်ယူရန်အောင်ကြိုးစားကြသည်။ ဒါဟာသင်ပေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်းဦးစားပေးမယ့် အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအတော်လေးအမြန်အမိန့်အပြောင်းအလဲနဲ့, ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ရေကြောင်းအချိန်များနှင့်တစ်ဦးလုပ်ရတဲ့-အခမဲ့ပြန်လာသည့်မူဝါဒ။
သင်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးအချိန်ဧည့်သည်ဆိုရင်ကျနော်တို့လုံးလုံးသင်သည်ကြိုဆိုပါတယ်နှငျ့သငျ Buddhatrends နှင့်သင်၏စျေးဝယ်အတွေ့အကြုံကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှရှုထောင့်အားဖြင့်ဝမ်းသာပီတိမည်ဖြစ်ကြောင်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏နှစ်ရှည်လများထောက်ခံအားပေးသူတစ်ဦးပြန်ဖောက်သည်ဆိုရင်ကျနော်တို့ကိုအများနှင့်ထုတ်ကုန်များ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုအတွက်သင့်ရဲ့ထောက်ခံမှုနှင့်ယုံကြည်မှုအဘို့သင်တို့ဆီသို့ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
ကျနော်တို့ရှိမရှိ, သင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုတန်ဖိုးထား ထောက်ခံ သို့မဟုတ်အပြုသဘောဆောင်တဲ့နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်စေရန်လုပ်ဆောင်နေကြပါသည် ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူသင့်ရဲ့စျေးဝယ်အတွေ့အကြုံကို.
Buddhatrends Support Team သို့